संसारभरका एनआरएन नेताहरू काठमाडौंमा - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
संसारभरका एनआरएन नेताहरू काठमाडौंमा
काठमाडौं । संसारभरका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का नेताहरु काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् । एनआरएन सचिवालयले सेप्टेम्बर २७ देखि अक्टोबर २३ सम्म एनआरएन डे को अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । सेप्टेम्बर २७ मा अतिथि देवो भव कार्यक्रमअन्तर्गत यूकेको उच्चस्तरीय टोलीको स्वागत गरिएको छ । बेलायतका पूर्वसांसदसहितको टोलीको समन्वय एनआरएनले गरेको हो ।
अक्टोबर १ मा एनसीसी फिनल्याण्डको समन्वयमा महोत्तरीमा ५५ जना बालबालिकालाई सहयोग प्रदान गरिएको छ । अक्टोबर ५ मा नेपाल पर्यटन बोर्डमा फोटो प्रदर्शनी गरिएको छ भने अक्टोबर ७ मा एनआरएन प्रेसिडेन्सियल खेलकुद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ह्विलचेयर वितरण कार्यक्रम खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा गरिएको छ । अक्टोबर ८ मा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम र नुवाकोटमा हेल्थ क्याम्प कार्यक्रम सम्पन्न भएको एनआरएनका सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटाले जानकारी दिए ।
एनआरएन सचिवालयका अनुसार अक्टोबर ९ मा गोरखाको नमूना वस्ती लाप्राकको अवलोकन, मोदीवेनी वृद्धाश्रम पर्वतको शुभारम्भ, सिन्धुलीगढी मास्टर प्लान सार्वजनिक र त्यही दिन अफिस वेरियर मिटिङ आयोजना गरिएको एनआरएन महासचिव डा. बद्री केसीले जानकारी दिए । एनआरएन डेका अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत अक्टोबर १० मा धादिङको गजुरीमा सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम, काठमाडौंमा एग्रिकल्चर प्रोमोसन कार्यक्रम, धादिङमै प्राविधिक तालिम केन्द्रको भ्रमण, धादिङ धुनिवेंसीमा खानेपानी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग वितरण र एफएनसीसीआईमा छलफल कार्यक्रम र आईसीसी बैठक बोलाइएको छ ।
त्यस्तै, अक्टोबर ११ मा पशुपतिनाथ र स्वयम्भूनाथमा पूजा, नेपाल पत्रकार महासंघमा ई–लाइब्रेरी निर्माणसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर, शङ्खमूलमा शङ्खमूल पार्कको ओपनिङ, अवार्ड वितरण तथा त्यही दिन एनआरएनको बालुवाटारमा बन्दै गरेको भवनमा कार्यालय सिफ्ट गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ ।
हरेक वर्ष दशैंको आसपास एनआरएन नेताहरु काठमाडौं आउने गरेका छन् । अक्टोबर १२ मा होटल सोल्टीमा रक्तदान कार्यक्रम र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई टेन्ट वितरण कार्यक्रम, त्यही दिन होटल सोल्टीमै विधानसभा शुरु हुनेछ भने विज्ञ सम्मेलन आयोजना हुनेछ । अक्टोबर १३ र १४ मा विज्ञ सम्मेलन चल्नेछ । एनआरएन डे अन्तर्गत अक्टोबर १५ मा सडक सुरक्षा क्याम्प र रक्तदानसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ ।
त्यसैगरी, शिक्षामन्त्रीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने सुनसरीको इटहरीमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । अक्टोबर १६ मा बागलुङमा सडक सुरक्षा क्याम्प र काभ्रे पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुनेछ । त्यस्तै, अक्टोबर २३ मा स्वास्थ्य चेतनासम्बन्धी कार्यक्रम र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा एनआरएन कार्डमा छुट पाउनेसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । अन्त्यमा, सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी कार्यक्रम हुने सहकोषाध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
दक्षिण एसियाबाहेकका मुलुकमा रहेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र विभिन्न कारणले गएका नेपाली नागरिकको संस्थाका रुपमा झण्डै १४ वर्षअघि एनआरएनको स्थापना भएको हो । एनआरएनको सञ्जाल झण्डै ७७ देशमा पुगिसकेको छ । एनआरएन स्थापनाताका ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारा नेपाली डायस्पोरामा निकै लोकप्रिय थियो । अहिले यो नारा लगभग हराएको छ । झण्डै १४ वर्षअघि स्थापना भएको एनआरएनमा राजनीतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता प्राप्ति, नेपालमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, एनआरएन कार्ड जारी गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई मुख्य सैद्धान्तिक मुद्दा बनाइएको थियो । एकपछि अर्को गर्दै यी माग आंशिकरुपमा पूरा भएका छन् । नेपालको संविधानले राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । अहिले राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता पाउने बाटो अगाडि बढेको छ ।
एनआरएनभित्र अबको नीतिगत अवस्था कस्तो हुने भन्ने बहस आवश्यक भएका बेला काठमाडौंमा विधानसभासमेत तय भएको छ । त्यसका लागि झण्डै ५ सय प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् । केही आउँदैछन् । अक्टोबर १२ मा काठमाडौंमा विधानसभा हुनेछ । त्यसका लागि विभिन्न देशबाट नेपाल पुग्नेले अक्टोबर ११ भित्र अनिवार्य रुपमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने छ । यस पटक सहभागी हुनका लागि १ सय अमेरिकी डलरसहित नाम लेखाउनु पर्नेछ । संघको विधानको दफा २९ को उपदफा ३ बमोजिम विधानसभामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तत्कालीन, निवर्तमान र संस्थापक पदाधिकारी, सदस्यहरु, सल्लाहकार, हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष वा निजले तोकेको एक जना प्रतिनिधि, विभिन्न समितिका संयोजक र आईसीसीले तोकेका १० जना विधानसभामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । विधानसभामा सहभागिताका लागि नाम दर्ता गराएका व्यक्तिलाई विज्ञ सम्मेलनमा समेत सहभागी गराइने छ ।
एनआरएनको विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिवले एनसीसी र आईसीसीमा पेश गरिसकेका छन् । संशोधनका लागि विभिन्न पक्षहरु समेटिएको छ । संघमा ५ विभागको प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार, व्यापार तथा लगानी, मानवकल्याण, ज्ञान सीप र नवप्रवर्तन, सांगठनिक तथा प्रशासनिक विभागको प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच विभागको नेतृत्व पाँच उपाध्यक्षलाई दिने र आईसीसीका सदस्यहरु विभागका सदस्य रहने प्रस्ताव तयार पारिएको एनआरएनका सल्लाहकार एवम् विधान संशोधन समितिका संयोजक डा. हेमराज शर्माले बताए । उपाध्यक्ष बन्नका लागि कम्तीमा पनि दुई वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उपाध्यक्ष मध्यपूर्व, मलेसिया जस्ता देशबाट चुनिने व्यवस्था गर्ने, हरेक विभागलाई हेर्नेगरी सचिवालयमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने पनि प्रस्तावमा रहेको छ । अध्यक्षलाई सहयोग गर्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था नगर्ने राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भई निर्वाचनमा भाग लिन कम्तीमा २ वर्ष पञ्जीकृत सदस्य भएको हुनुपर्ने, प्रतिनिधिहरुको संख्याको ५० प्रतिशत आईसीसी र एनसीसीमा काम गरेका व्यक्तिहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट छानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या घटाइएको छ । प्रतिनिधिको नामावली अनिवार्य रुपमा एक महिना पहिले सचिवालयमा पठाउनुपर्ने, प्रतिनिधि छनोट र तथ्याङ्कको व्यवस्थापन निर्वाचन समितिले गर्ने, सचिवालयका कर्मचारी र सम्भावित उम्मेदवारहरु संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै, एनसीसीहरुको अधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा बढीमा ३ महिना र कम्तीमा ४५ दिन पहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आईसीसीको निर्वाचन समितिले एनसीसीको निर्वाचनको सुपरीवेक्षणसमेत गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाप्रति विभिन्न देशका एनसीसीले असहमति जनाएका छन् । केही एनआरएन नेताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एनआरएनले आफ्नो पहिलो गैरआवासीय ग्लोबल विज्ञ सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । एनआरएनको आयोजनामा आगामी १२ देखि १४ अक्टोबरसम्म काठमाडौंमा हुने सम्मेलनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सल्लाहकार डा. शर्माले बताए । कार्यक्रममा अहिलेसम्म ४ सय बढी सहभागी हुने टुंगो लागेको र कार्यक्रमको ढाँचासमेत सार्वजनिक गरिसकिएको शर्माले जानकारी दिएका छन् । विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरु र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरुसँग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यावसायिक संस्थालाई जोड्ने अभिप्रायले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको शर्माले बताए । काठमाडौंको होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा हुने कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । १२ अक्टोबरमा बेलुकी ५ बजे प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ ।